WordPress: Gburugburu kachasị na ngwa mgbakwunye nke 2019 | Site na Linux
WordPress: Gburugburu na ngwa mgbakwunye nke 2019
WordPress: Gburugburu kachasị na ngwa mgbakwunye nke 2019
Otu n’ime ihe mere ndị mmadụ ji hụ ya n’anya WordPress CMS (WP) nke WordPress na nke a bi otu n'ime ebe mbụ na ndepụta nke kacha mma CMS nke oge a, ọ bụ n'ihi na enwere ike ịhazi ya nke ọma.
Nke a bụ, ekele maka nkwado ọ na-enye maka iji isiokwu (gburugburu) na ihe mgbakwunye (plugins) ndi nwe obodo ma obu ndi ozo. Ihe abuo gosiri na anyi kacha y nke abụọ biputere banyere WP.
Ọ bụ ezie na ndị nwere sava weebụ ha na WP, na-eke weebụsaịtị ha dị ịtụnanya mfe na ngwa ngwa, n'iji ihe di omimi na-akparaghị ókè gburugburu na plugins, Ọ bụghị ihe nsogbu, ojiji nke ndị a nwekwara maka ndị nwere ha webusaiti kwadoro na WordPress.com ee ọ bụ rue n’oge na-adịbeghị anya.
Taa usoro ntanetị a na-ebipụta akwụkwọ ntanetị nwere nkwado dị iche iche maka ọtụtụ puku isiokwu na plugins nke atọ (n'efu na ịkwụ ụgwọ), na ụfọdụ n'ime atụmatụ ịkwụ ụgwọ gị. Na akwukwo a anyi nwere olile anya inye obere ntuziaka nke kachasi nma ma obu nke kachasi nma nke eji eme onu na nchebara echiche nke mmadu niile.
Tupu igosi nke a ma ama, ewu ewu, isiokwu na plugins na nso nso a, n'efu na akwụ ụgwọ, na ma pụọ ​​na ikpo okwu WP, ọ dị mma ịkọwa nke ọma na ọ bụ Okwu na Ntanetị n'ime nnukwu ebe a na-ebipụta akwụkwọ webụ.
1 Gịnị bụ Isiokwu?
2 Gịnị bụ ngwa?
2.1 Atụmatụ nhazi
2.2 Atụmatụ atụmatụ
2.3 Atụmatụ azụmahịa
3 Apụta, Popular na nso nso
3.1.1 Ọ ka mma
3.1.3 Oge na-adịbeghị anya
3.1.5 N'ogwa na pụrụ iche aha
3.2.1 Ọ ka mma
3.2.4 Beta mmepe
3.2.5 N'ogwa na pụrụ iche aha
Gịnị bụ Isiokwu?
A na-ewerekarị isiokwu dị na sọftụwia ọ bụla a setịpụrụ ihe ndị bụ isi metụtara otu atụmatụ njiri mara mma na predefined, nke ha nile na-enye otu ihe nlere anya na arụmọrụ, nke n'aka nke ya, na-enwekarị ihe oyiyi akara nke ngwaahịa.
N'ime WP enwere ike ịkọwa isiokwu dị ka:
Otu faịlụ nke mejupụtara Koodu nke na-ekwe ka mgbanwe nke ibe weebụ na blọọgụ gbanwee. Nke ahụ bụ, ha bụ ihe abanye n'ime web peeji nke, nke n'aka nke ya, wulite ntọala ya ma kaa nhazi na ọdịdị nke ihe ndị dị n'ime gị, site na mkpụrụedemede ederede ederede, oke site na leta ma ọ bụ agba, ka ndabere oyiyi, na hyperlinks ma ọ bụ dị iche iche wijetị na-eme ka izugbe aesthetic.
Iji isiokwu dabara adaba na weebụsaịtị anyị nwere ike ịba uru na / ma ọ bụ baa uru n'ihi ihe ndị a iji tụlee:
A na-arụkarị ha ngwa ngwa na ngwa ngwa na obere nkeji.
Ha anaghị achọkarị echiche nke mmemme ma ọ bụ mmepe weebụ.
Ha na-ekwe ka ịmegharia aesthetics nke ọrụ weebụ na niche ahịa ma ọ bụ nke ndị na-agụ, nke isiokwu nke otu.
Ha na-eme ka ọ dị mfe iji mesie akụkụ ndị a chọrọ anya dị mkpa, dị ka ihe dị iche iche nke multimedia, imewe ntakịrị ihe na njikọta na netwọkụ mmekọrịta.
Ha na-ekwe ka ọrụ weebụ anyị megharia ngwa ngwa na Ntugharị Na-eme Ihe, ka e wee nwee ike iji ụdị ngwaọrụ ọ bụla lelee ya anya nke ọma.
Ha na-ekwe ka iji wijetị na-akwado nhazi nke nhazi na nhazi nke ngalaba nke ọrụ weebụ.
Na nkenke, ịhọrọ ma jiri isiokwu WP kachasị mma na-enyere aka ilekọta aesthetics nke ọrụ weebụ ọ bụla ma nye ndị ọbịa anyị, ndị ọrụ, ndị otu na ndị ahịa anyị ezigbo ihe ngosi, nke a nwere ike ịtụgharị gaa na azụmaahịa azụmaahịa.
Otú ọ dị, anyị ga-akpachara anya iji isiokwu jupụtara na arụmọrụ ma ọ bụ karịa oke, ebe ọ bụ na plugins ga-ekpuchi ihe ndị a, ebe ọ bụ na ịgwakọta ihe ndị a na-ahụ anya na arụmọrụ n'ime isiokwu nwere ike ịmanye anyị ịlụ isiokwu ahụ ogologo oge.
Gịnị bụ ngwa?
A na-akpọkwa ya plugins, n'ozuzu ya ngwa mgbakwunye abụghị ihe ọ bụla karịa snippet ma ọ bụ akụrụngwa nke koodu emere iji gbasaa ọrụ nke mmemme ma ọ bụ ngwa ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-eji ya maka SW iji nweta ọtụtụ ohere ndị ọzọ site na itinye ọrụ ndị ọzọ.
Yabụ, na mgbakwunye ndị agbakwunye, mgbakwunye ụlọ ọrụ ndị ọzọ enwere ike ịnye ndị ọrụ jiri ya, na-enweghị mkpa maka mpụga SW ndị ọzọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị a kwuru. Kedu nke bụ ezigbo ụzọ iji chịkọta ya ọnụ n’otu ebe.
Ebumnuche nke ngwa mgbakwunye na mgbakwunye na gbasaa akụrụngwa ma ọ bụ ọrụ nke SW, ọ bụ mee ka ọrụ nke ndị tụgharịrị na ya dị mfe, ebe ọ bụ na ndị a ga-agbarịrị ọrụ ahụ ma, n'otu oge ahụ, na-enye ogo ọrụ nke ọrụ dị mkpa iji rụọ ọrụ ndị e nyere ha, si otú a na-ezere ịnwekwu mmemme.
N'ime WP enwere ike ịkọwa ngwa mgbakwunye dị ka:
Mpempe akwụkwọ dị mfe ma ọ bụ nke dị mgbagwoju anya (obere ihe omume) nke na-abawanye arụmọrụ na njirimara nke ọrụ webụsaịtị anyị yana meziwanye WordPress n'akụkụ niile.
Arụ ọrụ na njirimara ndị a na-abụkarị:
Ngwaahịa ahia (e-Comensive)
Mpikota onyonyo na akpaghị aka
Melite SEO nke ibe anyi
Mee akwụkwọ ndabere
Jikwaa ọnụ ọgụgụ
Mee ahia ahia
Jikwaa netwọk mmekọrịta
Meziwanye Nche na Web Traffic
N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ọtụtụ dịgasị nnọọ iche na ohere ya enweghị njedebe. Ọ bụ ezie na maka ndị na-eji WordPress.com, kwuru n'elu ikpo okwu na-akpaghị aka na-ekpuchi arụmọrụ ndị a site na mgbakwunye plugins, dabere na atụmatụ ndị ahọpụtara:
Nchịkọta WordPress.com (Nchịkọta Google Analytics)
SEO dị mkpa (Nchọpụta Nchọgharị Nchọpụta)
Advanced veranda (mosaics, presentations, among other).
Netwọk mmekọrịta (bọtịnụ mgbasa ozi mmekọrịta na posts na ibe)
Budị Nrụpụta (Contactdị Kpọtụrụ)
Ogologo wijetị (Dị ka Flickr, Eventbrite, kalenda Google, Twitter, wdg)
Akismet (nchekwa mgbochi spam dị elu)
Ndabere na mbupụ
Ogologo ụzọ mkpirisi (Video, ọdịyo, na ndị ọzọ.)
Enweghi ngwụcha akwụkwọ mpịakọta
Email ndebanye aha (Soro bọtịnụ)
Okwu ndị dị elu (Dị ka nhọrọ maka nkọwa, onye ọrụ kwuru, ọkwa, wdg)
Dị ka nhọrọ (Na posts)
Ntinye (Site na Facebook, Twitter, Instagram, na ndị ọzọ.)
Nhazi omenala (Akara ederede, CSS Editor, n'etiti ndị ọzọ.)
Mwepụ nke mgbasa ozi
Apụta, Popular na nso nso
Ego ole na Gburugburu na Plugins dị ka saịtị WP ọ bụla ga-eji anyị ga-ekwu banyere 3 na nke ọ bụla na ngalaba na anyị ga-eme ka a pụrụ iche banyere eje ozi dị ka ndu ndu na nyocha maka onye ọ bụla.
Ọ ka mma
Iri abụọ na iri na itoolu
Oge na-adịbeghị anya
N'ogwa na pụrụ iche aha
Mega Main Menu WordPress ngwa mgbakwunye.
Smush Image Comprenssion na njikarịcha
W3 Ọnụ ọgụgụ zuru ezu
Onye na-ahụ ihe na-ahụ anya (WPBakery Page Builder maka WordPress)
Kpọtụrụ Ụdị 7
Ama Iwu kuki (GDPR Nkwenye Kuki)
Dị mfe SSL
Dịka anyị nwere ike ịhụ, WordPress n'ụdị ya, ya bụ, ibudata ma wụnye ya n'ụdị ngwa maka ọrụ ozugbo na sava anyị ma ọ bụ n'ụdị ya dị elu, ya bụ, ọrụ n'ịntanetị site WordPress.com bụ ezigbo usoro mbipụta weebụ nke na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ịzụlite site na weebụsaịtị ndị dị mfe na ọrụ ntanetị oge a na nke dị mgbagwoju anya.
Na mgbakwunye ikwe ka anyị jiri nwayọ na-eto mmepe ha site na iji isiokwu na plugins nke na-etinye oke njedebe nke atụmatụ na arụmọrụ ndị ọzọ kwesiri saịtị ọ bụla yana ọrụ ntanetị nke nnukwu nzukọ, ma ọ bụ ọha ma ọ bụ nkeonwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » WordPress: Gburugburu na ngwa mgbakwunye nke 2019
GitHub Service Package Registry a ọrụ kwekọrọ na NPM, Docker, Maven, NuGet na RubyGems
Mmanya 4.8: gini bu ihe ohuru na uzo ohuru nke nkpuchi ndakọrịta